Jose Mourinho Iyo Cristiano Ronaldo Oo Si Layaab Leh Uga Hadlay Laacibka ay Manchester United Ku Dhowdahay Heshiiskiisa Ee Bruno Fernandes | Laacib.net
Manchester United ayaa lasoo warinayaa inay ku dhowdahay dhamaystirka heshiiska xiddiga reer Portugal ee Bruno Fernandes oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda Sporting Lisbon.
United ayaa la sheegay inay heshiis shaqsi ah la gaadhay Fernandes oo uu tababare Solsjaer doonayo inuu u buuxiyo boosaska khadka dhexe ee ka wiiqmay markii ay dhaawacyadu soo gaadheen Paul Pogba iyo Scot MacTominay, kuwaas oo laacibiin la tayo ah laga dhex waayey xiddigaha booskaas ee hadda ku sugan Old Trafford.
Bruno Fernandes oo ah kubbad-sameeye farsamo badan, waxa uu ku fiican yahay dhalinta goolasha iyo abuurista fursado ay asxaabtiisu dhaliyaan, waxaana sannad iyo badhkii tegay uu kooxdiisa Lisbon u dhaliyey 37 gool, kuwaas oo aanay jirin laacib booskiisa ah oo ka ciyaara horyaalka Premier League oo tiro intaas le’eg oo goolal ah dhaliyey.
Cristiano Ronaldo, Nani iyo Jose Mourinho waxa soo jiitay tayada Fernandes, waxaanay warbaahinta la wadaageen aragtidooda hal-abuurka iyo kubadda sarraysa ee ku jirta laacibkan.
Ronaldo ayaa waxa uu sheegay in uu garan la’yahay sababta uu Bruno Fernandes ugu biiri la’yahay kooxaha waaweyn.
“Xulka qaranka, waxaanu ku haysanaa Joao Cancelo, Bruno Fernandes, cidina ma garnayso sababta aanu u tegin (koox weyn). Xulka qarnka, waxa aanu haysanaa ciyaartooyo maskax badan.” ayuu yidhi Ronaldo.
Tababaraha kooxda Tottenham, Jose Mourinho ayaa isaguna ka hadlay laacibkan, waxaanu yidhi: “Waxaan la yaabay xili ciyaareedka uu qaadanayo Bruno Fernandes. Way fududdahay in la saadaaliyo tayadiisa, waa ciyaartoy aad u wanaagsan oo goolal tiradoodu aad u badan tahay khadka dhexe ka dhalinaya.
“Waxay muujinaysaa inaad u baahan tahay dareen iyo tayo aad ku dhaliso, isaguna wuu leeyahay dhamaantood. Kubadda si fiican ayuu weerarka u geeyaa, si fiican ayuu u madaxeeyaa, waanu deggan yahay marka ay goolhayaha isku keliyeystaan. Waxa uu bogcad ka helaa xerada ganaaxa. Waxa kasta wuu leeyahay” Ayuu yidhi Mourinho.
Sidaas oo kale, Luis Nani ayaa sheegay inuu mar walba u sheego Bruno Fernandes in uu leeyahay tayadii uu kaga ciyaari lahaa horyaalka Premier League oo ay kubaddiisu ku habboon tahay, haddii uu tagana uu laacib weyn ku noqon doono.
Si kastaba ha ahaatee, United ayaa la filayaa in saxeexa laacibkan ay si buuxda u dhamaystiro maalmaha soo socda
Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Ciyaarta Manchester United Ee Axadda, Xalaadda Dhaawacyada Laacibiintiisa Iyo Sida Uu Iskugu Diyaarinayo Solskjaer
Maxay Tahay Farriinta Uu Luis Nani U Diray Bartilmaameedka Manchester United Ee Bruno Fernandes? Miyuu Ku Dhiirigeliyey Inuu Ku U Saxeexo United Mise Wuu Uga Digay?